Ulandele ubizo lwamakhono oweGagasi | Isolezwe
Ulandele ubizo lwamakhono oweGagasi
ezemisakazo / 8 June 2017, 09:58am / MCEBO MPUNGOSE
UMSAKAZI weGagasi FM uZola ‘Zeelovin’Myeza osanda kufakwa ohlelweni lwangoLwesihlanu kulesi siteshi, iThe Friday Hangoput alusakaza noKing SfisoIsithombe: SITHUNYELWE
UMSAKAZI weGagasi FM uZola ‘Zeelovin’ Myeza uthi uyintokazi enamakhono amaningi endimeni yezobuciko. UZola (24) usanda kufakwa ohlelweni lwangoLwesihlanu kulo msakazo, iThe Friday Hangout ayisakaza noKing Sfiso.
Lo msakazi ohlala eMorningside, eThekwini, uthi ubizelwe endimeni yezobuciko kwazise ungumsakazi okwazi ukucula nokulingisa.
Empeleni ngaphambi kokuthi angene emsakazweni, wayekade ethole umfundaze wokuphothula izifundo zokulingisa kwenye yamanyuvesi ahamba phambili kuleli, i-University of Cape Town (UCT).
“Ngineziqu zeMedia and Arts engiziphothule e-UCT ngo-2015 emuva kokuthola umfundaze weNedbank Arts Scholarship komunye umncintiswano engawungenela ngawunqoba,” kusho yena.
Uthe ukucula yinto yokuqala eyamenza wathanda ezobuciko, kwalandela ukulingisa kodwa ngokuhamba kwesikhathi wazithola ekuthanda nokusakaza.
“Ezifundweni zokulingisa, okuningi esikwenzayo kuhambisana nokukhuluma ngokukhululeka. Abantu babengazisa ukuthi mhlawumbe ngingenza kahle uma ngingase ngingene emsakazweni ngoba ngikhuluma kahle. Ngaqala ngangakunaka abebekusho kwazise ngangigxile emculweni nasekulingiseni,” usho kanje.
Uthe ngokuhamba kwesikhathi wagcina ekhethe ukungena emsakazweni i-UCT Radio, yasesikhungweni ayefunda kuso ngo-2015.
Emuva kwalokho uthe wathola ithuba eliyingqayizivele lokuqeqeshwa kwiGagasi FM, engesinye seziteshi ezihamba phambili KwaZulu-Natal.
“IGagasi lingakhele isisekelo esihle kwezokusakaza. Ngonyaka odlule ngikhethe ukugxila ekusakazeni unyaka wonke ukuze ngikhule ngizakhele igama. Ngikujabulele kakhulu ukuba kulesi siteshi” kusho uZeelovin obesakaza uhlelo iThe Take Off ngoMgqibelo nangeSonto kwiGagasi.
Lo msakazi oqede uGrade 12 eDanville Park Girls, uthe uma kuziwa kwezemidlalo ungumlandeli wokuqina weqembu lase-England, iChelsea FC kanti kuleli uzithandela iBush Bucks FC.
Kuthelevishini uthe uyazifela ngomdlalo owuchungechunge ovela ku-SABC1, Uzalo, iThe Lockdown no#Mswenko owethulwa uzakwabo kwiGagasi uNomalanga Shozi.
Uthe ukudla angakupheka uma kungathiwa uvakashelwe abantu abakhethekile kungaba yinyama yemvu, ispinashi ne-couscous.
UZeelovin uthe noma egxile emsakazweni njengamanje, kukhona izindaba ezimnandi aziphathele abantu bakuleli ezithinta ukulingisa kodwa ngeke akwazi ukuzidalula manje.
“Lindani nje ngizonazisa maduze,” kuphetha yena.